China ukutya Sack mveliso kunye nabathengisi | Ukuqhayisa
Iingxowa zethu zoKondla luhlobo oluhlaziyiweyo lomiliselo kwimidlalo yokhuphiswano. Uyilo luye lwalinganiswa kaninzi kwiminyaka emininzi, isaka lokutya lenziwe nge-1050D Cordura 100% ibhegi yokwakhiwa kwenayiloni enezibambo zenayiloni ezitshixwayo, ii-seams eziqiniswe kathathu, kunye nokuvulwa kwe-funnel yethu ukuze kube lula ukuzaliswa ngokuchanekileyo.
Njengoko kubonwe kwimidlalo, ukuphatha okude kweFack Sack kwenza ukuba iimbaleki zikhawuleze zithathe ubunzima zize zijiwule ngokufanelekileyo entloko okanye entanyeni. Amanqaku apho izibambo zihlangana khona neekona zengxowa ziqinisiwe nge-nylon webbing, kwaye i-zipper ibonisa umxhasi we-polyurethane kunye nokugubungela ukuphucula ukuguquguquka, ukuvala ukuchitheka, nokukhusela ukudibana ngqo nomqolo womsebenzisi. Iziphumo yingxowa yesanti ekulula ukuyilawula kwaye ikhululekile ukubaleka nayo. Kukwalungele ngokulinganayo ukunyakaza kwe-squatting, i-thrusters, ucoceko kwaye ucinezele, kunye nokunye.
Yondla iSaka ngobukhulu obuthathu: 50lb, 100lb, 150lb
Nceda uthathe inqaku: Ubungakanani bobunzima obungasentla bhekisa kubungakanani obulinganiselweyo xa buzaliswe ngesanti yokudlala eyomileyo. Ubunzima obukhulu buya kwahluka xa usebenzisa ezinye izinto zokufaka. Abathengi abakhetha ukongeza iodolo yento yokugcwalisa irabha kwi-crumb kwiodolo yabo, ukongeza, ezi ngxowa azizaliswanga.
1.1050D Cordura i-100% yezinto zenayiloni, i-YKK zipper.
Izibambo zenayiloni ezi-2.looped, eziqinisiweyo zemithungo ephothiweyo, ukuvulwa kwe-fannel-filler.
Ubukhulu ezintathu: 50lb, 100lb, 150lb
I-logo ye-5.embroidery, ilogo yokuthunga, ilogo yokushicilela eshushu, ilogo yokuprinta iyafumaneka.
Egqithileyo Inkanyamba eStrongman yesaka
Okulandelayo: Ibhegi yesanti eyomeleleyo